कार्तिक र साराको ब्रेकअप ? – Khabar Silo
पछिल्लो समय बि-टाउनमा कार्तिक आर्यन र साराअलि खानलाई लिएर विभिन्न चर्चा हुने गरेको छ । बलिउडका फ्रेस अनुहार यी दुइनै एक अर्कालाई मन पराउछन् भने यिनलाई विभन्न स्थानमा स्पोट पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर , पछिल्लो समय यी दुइको सम्बन्धमा दरार आएको खबर भारतीय मिडियामा छ ।
कार्तिक र सारा प्रेममा थिए । नजिकिदै गर्दा यी दुइले इम्तियाज अलिको निर्देशनमा तयार भईरहेको लभ आजकलको सिक्वेलमा काम गरे।सम्बन्ध झनै नजिकियो । तर , त्यसपछि एकपछि अर्को प्रोजेक्टमा समय दिदा आफ्ना लागि समय छुट्याउन सकेनन् । फलत यी दुइको सम्बन्धमा दरार आयो ।
भारतीय मिडियालाई आधार मान्ने हो भने यी दुइको ब्रेकअप भईसकेको छ र कारण समय नै हो । एक अन्तर्वातामा साराले आफ्नो ‘क्रस’ कार्तिक बताएपछी यी दुइको चर्चा सुरु भएको थियो । फ्रेस जोडीको रुपमा लिइएको यी दुइलाई बलिउडको सम्भावना बोकेको कलाकारको रुपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । (एजेन्सी)
साम्राज्ञीको तर्क–‘स्टारडमले मात्र कहाँ पुग्छ, मुख मात्र हेर्न को आउँछ र ?’
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’मा काम गर्दा र अहिले ‘रातो टिका निधारमा’मा काम गरिरहँदा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह आफ्नै स्टारडममा अन्तर देख्छिन् । अहिले दर्शक चलाख छन् । कलाकारको अनुहार मात्र हेर्न दर्शक हलसम्म पुग्दैनन् । साम्राज्ञीले यो राम्रोसँग वुझेकी पनि छिन् । उनी भन्छिन्‘अहिले स्टारडमले मात्र पुग्दैन । कुनै कलाकारको मुख मात्र हेर्न त […]
‘मुन्द्रेको कमेडीमा’ करिश्मा हाँसेको पति विनोदलाई मन परेन, पहिलो पटक खोले मुख ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । मुन्द्रेको कमेडी क्लब शो मा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर अध्यक्षको रुपमा छन् । उनी शो को दास्रो सिजनमा आएकी हुन् । यस अघि दिपा श्री निरौलाले अध्यक्षता गर्ने गरेकी थिइन् । दोस्रो सिजनमा करिश्मा भित्रिदा निकै चर्चा भएको थियो । दिपाश्री विवादित भएकै बेलामा उनको स्थानमा शो मा करिश्मा भित्रिएकी हुन् । करिश्मा हाँस्य […]
हलबाट १५ करोड कमाएको ‘छक्कापन्जा-२’ युट्युबमा रिलिज
काठमाडौंब्लकबस्टर फिल्म ‘छक्कापन्जा’को दोश्रो संस्करण ‘छक्कापन्जा२’ युट्युबमा सार्वजनिक गरेको छ। रिलिज भएको करिब दुई वर्ष पुग्दा फिल्मको डिजिटल अधिकार लिएको कम्पनी हाइलाइट्स नेपालले फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक गरेको हो। दिपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा युवायुवतीको अष्ट्रेलिया मोहको कथा व्यंग्यात्मक ढंगले पस्केको थियो। फिल्ममा दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, वर्षा राउत, […]
मेस्सी र अगेरो राष्ट्रिय टिममा फर्किने बारे यसो भन्छन अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक !!